कृष्ण प्यासी (krishna pyasi): गजल के हो र कसरी लेखिन्छ?
त्यस्तै समध्वनी को मतलव पनि माथिको एउटा सेर हेरेर नै बुझ्नु पर्छ। बराबर अक्षर आए भन्दैमा गजल हुदैन, त्यहाँ हामीले गजल बोल्दा समान ध्वनि निस्कनु पर्छ। जस्तो कि अर्थपूर्ण अनि गजलको भाव झल्किनु पर्छ, जसले गर्दा गजल बोल्दा शब्दको उचाई संगै बोल्नेको मन प्रफुल्ल होस्। मतलव गजलले पूर्ण अर्थ बोकोस। त्यो नै सबल गजल बोल्न योग्य हुन्छ.
बाँकी अर्को बसाइमा..................﻿